माता मनकामनाको दर्शन गरि पढ्नुहोस तपाईको यो साताको भाग्य, फागुन १६ देखि २२ गतेसम्मको राशीफल हेर्नुहोस् – Paluwa Khabar
माता मनकामनाको दर्शन गरि पढ्नुहोस तपाईको यो साताको भाग्य, फागुन १६ देखि २२ गतेसम्मको राशीफल हेर्नुहोस्
फागुण १७, २०७७ सोमबार 37
मेष राशिका लागि यो साता राम्रो रहेको छ । कुनै पनि कार्यमा तपाईको साहस तथा पराक्रम बलियो रहने छ । यो साता आम्दानी बढ्नेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित लाभ हुनेछ । पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि यो साता सुमधुर रहनेछ । विद्यार्थीका लागि हेर्दा पढाईमा कमजोरी हुन सक्ने देखिन्छ ।
साताको शुरुमा धन प्राप्तीको अवसर रहनेछ । यो साता व्यापार व्यावसाय बाट प्रशस्त धन आर्जन हुनेछ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । परिवार तथा साथीभाई सँग रमाईलो एवं मनोरञ्जनात्मक कार्य मा संलग्नता हुनेछ । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ भने ईज्जत र प्रतिष्ठा समेत बढ्नेछ । साझेदारीका कार्यबाट लाभ हुनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य कमजोर रहनेछ ।
मिथुन राशिका लागि यो साता आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बलियो रहनेछ । तपाईको कार्यको प्रशंसा हुनेछ । यो साता आर्थीक अवस्था मिश्रित रहनेछ । साथी भाई सँग रमाईलो भेटघाट हुने एवं सहकार्य हुने अवसर जुट्नेछ। व्यापार व्यावसायमा लगानी अनुसार प्रतिफल मिल्न सहि योजनाका साथ निरन्तर परिश्रम आवश्यक छ ।
कर्कट राशिका लागि यो साता नसोचेको क्षेत्रमा खर्च हुन सक्नेछ । काममा बढि दौडधुप हुने तर उपलब्धि भने कम हात लाग्नेछ। मंगलबार देखि भने अवस्थामा सुधार हुनेछ तपाईको नोकरीमा सफलता मिल्नेछ । कार्यस्थलमा सकारात्मक वाताबरण कायम हुनेछ । बौद्धिक क्रियाकलापमा चासो बढ्नेछ । नयाँ सवारी साधन जोड्ने योग छ । व्यापार व्यावसायमा विस्तार हुनेछ ।
यो साता व्यापार व्यावसाय बाट प्रशस्त आम्दानी हुने देखिन्छ । आत्मबिश्वास एवं आत्मसम्मान उच्च रहनेछ । नोकरीमा सफलता मिल्नुका साथै सामाजिक कार्यबाट ईज्जत र प्रतिष्ठा समेत बढ्नेछ । आर्थीक अवस्था सबल रहनेछ । व्यापार व्यवासाय बाट उचित मुनाफा आर्जन हुनेछ । आफ्ना दाजुभाईको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
यो साता नोकरी गर्ने हरुका लागि शुभ समय रहनेछ । सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा मन जानेछ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ । साथीभाईको साथ र सहयोग ले आत्मविश्वास बढ्नेछ । यो साता व्यापार व्यावसाय मा सकारात्मक समय रहनेछ । आम्दानी बढ्नेछ । परिवारमा मेलमिलाप र शान्ति कायम हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ ।
आफुले गर्ने हरेक कार्यमा भाग्यले साथ दिनेछ । आर्थीक अवस्था सकारात्मक रहनेछ । व्यापार व्यापसाय बाट पनि उचित लाभ मिल्नेछ । विशेष गरि कृषिजन्य वस्तुको व्यापार व्यावसायबाट सोचे अनुरुप नै लाभ मिल्नेछ । कार्य स्थलमा तपाईको कार्यको प्रशंसा हुनेछ । सन्तान बाट सुख हुनेछ । त्यसैगरि धन बचत हुनेछ । बिद्यार्थीको पढाईका लागि उत्तम साता रहेको छ ।
कतिपय कार्यमा रोकावट हुन सक्नेछ । मंगलबार देखि भने अवस्थामा सुधार हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ । जिवन साथिको प्रेम र सम्मान बाट तपाईको आत्म बिश्वास उच्च हुनेछ । यो साता मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ । साथीभाई सँग रमाईला पल हरु व्यतित हुनेछन । नोकरीमा सफलता मिल्नेछ । सहकर्मी साथी बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
सुन्दरता एवं भोग विलासमा मन जान सक्नेछ । जिवनसाथीसँग रमाईला पल हरु व्यतित हुने योग छ । साझेदारीका कार्यबाट लाभ हुने एवं व्यापारिक कार्यका लागि यात्रा हुने योग छ । स्वास्थ्य अवस्था सकारात्मक रहनेछ । आफ्ना साथिभाई बाट महत्वपुर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसाय मा विस्तार हुनेछ । आम्दानीका क्षेत्रहरु बढ्दै जानेछन् ।
मामली पक्ष बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्नेछ । आफ्ना सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । यो साता तपाईको सिर्जनसिलता बढ्नेछ । तपाइको बौद्धिक क्षमताको उचित कदर हुनेछ । कार्यस्थलमा सहकर्मी साथी बाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरि आफ्नो जिवन साथि सँग रमाइल पल हरु विताउने अवसर प्राप्त हुनेछ । आर्थीक अवस्था मा सामान्य उतार चढाव आउन सक्नेछन् ।
सामाजिक एवं राजनितिक क्षेत्रमा तपाईको उचाई बढ्नेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ। जिवनसाथी सँग प्रेमिल समय वित्ने देखिन्छ । जिवन साथीको प्रेम र समर्पण भाव उत्तम रहनेछ । आर्थीक अवस्था सबल रहनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित मुनामा आर्जन हुनेछ । नोकरिमा तपाईको कार्यको उचित कदर हुनेछ । आफ्ना दाजुभाई तथा परिवारका अन्य सदस्य सँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ ।
मिन राशिका लागि आईतबार र सोमबार केहि कमजोर दिन रहेका छन् । विशेष गरि स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुने एवं घरायसी समस्याले चिन्ता बढ्न सक्नेछ । तर मंगलबार देखि भने अवस्थामा महत्व पूर्ण सुधार हुनेछ । धन आर्जन हुनेछ । स्वास्थ्य अवस्था पनि यो साता सबल रहनेछ । यि दिनहरुमा साथीभाई सँग रमाइलो कुराकानी हुने, उनिहरुको साथ र सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ ।
नायक पल शाह पक्राउ पर्दै , यसरी फसाउदै छ्न पल शाहलाई ; कुटपिटकाे आराेप |
Prev५/७ हजार भ्रष्टहरुलाई जेलमा नठोकि म “प्रधानमन्त्री पद” छोड्दिन : प्रधानमन्त्री केपी ओली
Nextदेख्ने बित्तिकै साक्षत माहादेव को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ
४ दिन सार्वजनिक विदा (सूचनासहित)
साईबर ब्युराेकाे खाेजिमा रहेका भिटेन उच्च अदालकाे शरणमा
भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्या’ रालाइसिसको सम्भावना- यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत ?
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (329)